Iwu Kachasị Mkpa na Social Media PR | Martech Zone
Iwu Kachasị Mkpa na Social Media PR
Wednesday, July 28, 2010 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 19, 2012 Ryan Smith
Site n'ikike nke Dreamstime
Chọrọ ịma akụkụ kachasị mma nke iji usoro mgbasa ozi eme ihe dịka akụkụ nke mkpọsa mmekọrịta ọha na eze gị? Enweghị iwu.
A na-echetara ndị mmadụ oge niile iwu. Anyị ga-agbaso AP Stylebook, a ga-edepụta akụkọ akụkọ n'ụzọ ụfọdụ ma gbuo ya n'oge ụfọdụ.
Mgbasa mgbasa ozi bụ ohere ụlọ ọrụ gị iji mebie ihe ahụ ma mepụta ọdịnaya pụrụ iche nke metụtara ọha na eze n'ezie. Isi okwu di na ya. Ọdịnaya bụ mgbọ ọla ọcha. Ọ bụrụ n’ị nwere ike ịmepụta ọdịnaya na-atọ ụtọ ma dị ọhụụ, mgbe ahụ ị ga-abụ otu nzọ ụkwụ ịbịaru ebumnuche gị na ebumnuche gị.
Already maraworị ihe m na-ekwu. You nwetụla mgbe ị kpebiri ịchọ ebe nrụọrụ weebụ nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ibe Facebook naanị ịchọta na ọ dịghị adị? Ma ọ bụ na emelitebeghị ya kemgbe March 2008? Thoselọ ọrụ ndị ahụ ga-ada ụda gị, wee kwụsị ntụkwasị obi na nkwanye ùgwù gị.
Mepụta ọdịnaya ọhụụ na-atọ ụtọ abụghị naanị ịdọta ndị mmadụ na saịtị gị, kamakwa ọ na-arata ha ịlaghachi. Igodo nke ịchọta ọdịnaya dị mfe dị mfe: chọpụta ihe ndị ọbịa gị chọrọ, ma nọgide na-eme ya. Ọ nweghị ihe o mere. Twitter, Youtube, Flickr, Foursquare, ma ọ bụ blog… mepụtara ọdịnaya maka onye ọrụ ị chọrọ ma debe ya.
Usoro mgbasa ozi ọha na eze dị ike, kamakwa ọ bụ ihe na-atọ ụtọ maka ndị mmadụ n'ihi na anyị nwere ike ịnwale ihe dị iche iche ma nyochaa nsonaazụ ya ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo. Site n'ebe ahụ, anyị nwere ike gbanwee mkpọsa anyị iji mejupụta ọhaneze anyị chọrọ. Iji nwee ihe ịga nke ọma n'ịntanetị ị gaghị atụ egwu ịnwale ihe ọhụrụ. Ọ bụrụ na ndị ahịa gị chọrọ foto azụmahịa gị wee nye ha foto. Ọ bụrụ na ha chọrọ ịhụ akụkọ sitere na na gburugburu ụlọ ọrụ gị, nye ha ya.
Mmekọrịta ọha na eze anaghị agbanwe agbanwe. Ọ gbanwere. Ọ dị gị n'aka dị ka onye ọrụ PR ịghọta ikike na ohere nke mgbasa ozi mmekọrịta, wee mepụta usoro iji jiri ngwaọrụ niile dị n'aka. Ngwaọrụ ndị a dị ọhụụ ma ọ dịkwa otu ihe dị mkpa iji mụta site na ihe ịga nke ọma gị, dịka ị ga-amụta na ọdịda gị.
Tags: mmekọrịta ọhanezeelekọta mmadụ mediaSocial Media Marketingelekọta mmadụ mgbasa ozi pr
Ryan bụ onye njikwa nke Social Media na Business Development na Raidious. Ọ bụ ọkachamara mmekọrịta ọha na eze onye ọkachamara na iji mgbasa ozi mmekọrịta dị ka ngwá ọrụ nkwukọrịta ahịa. Ryan nwere ahụmahụ na egwuregwu, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ụlọ na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Nzuzo anyi banyere njikarịcha ihe njin
Nụrụ Mgbe Naanị? Isi ụkwụ isii?
Jul 29, 2010 na 1:54 PM
Nice post Ryan. Kedukwanu na ihe nnọchite anya ihe n'agbanyeghị? Ọtụtụ ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ na @Vocenation achọghị iji $ $ $ na-anwale ihe ọhụrụ. Ha choro imefu $$$ na ndumodu nke sitere na ahuhu na nke ahu gha adi nma na uzo ahia. Debfọdụ arụmụka ochie (na afọ ochie m pụtara afọ 6 gara aga) na ebe a mana nke a bụ ihe m na-eche oge niile m gụrụ post gị.
Jul 29, 2010 na 7:58 PM
Colin, m na-ahụ nke a ọtụtụ. Ihe m gbalịrị ịchụpụ ụlọ na atụmanya ndị a bụ ma atụmatụ a ọ na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ọ bụ, mgbe ahụ ezi… ụzọ dị mma yana mmachi nwere ike ịbụ ụzọ ị ga-esi. Agbanyeghị, ọ masịrị m igosi data na nyocha nke uto n'ịntanetị, ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, wdg nke na-egosi na agwa na-agbanwe.
Mgbe ụfọdụ, atụmanya ka na-ekwenyeghị na ihe agbanweela… na m outta e. Agbanyeghị, ndị nwere ezi uche hụrụ mgbanwe ahụ ma ana m emesi ha obi ike na ọrụ m bụ inyere ha aka na mgbanwe ahụ.
Jul 29, 2010 na 8:10 PM
M ga-esi nke a ọtụtụ ahịa, "“ nwere ike igosi anyị atụmatụ nke gosipụtara, ma na-arụ ọrụ? "
Azịza ya bụ 'n'ezie', mana ọ naghị adịkarị mfe. Everylọ ọrụ ọ bụla, ụdị mmadụ ọ bụla chọrọ ụdị olu dị iche. Yabụ, otu atụmatụ ahụ anaghị arụ ọrụ mgbe niile.
Mepụta atụmatụ, mana isi na atụmatụ ahụ pụọ mgbe ihe dị egwu bilitere. Nhazi ihe na-eduga n'ahịa kachasị mma, n'ịntanetị ma ọ bụ na uzọ ọzọ. Nke ahụ bụ echiche m!
Jul 29, 2010 na 11:48 PM
Dị ka onye bụbu ụlọ ọrụ nkwukọrịta VP, M ekele gị n'ọnọdụ na iwu. Mana m ghọtakwara na ọ dị mkpa ịbụ ụkpụrụ nduzi na-echebe ụlọ ọrụ na onye okike ọdịnaya. Echere m na ọ dị oke mkpa na mgbe PR na-emepụta ọdịnaya, ọ kwesịrị itinye uche ya na mmetụta ya na PR, ahịa, akara, nkwado ndị ahịa na ahịa. Ọ na-eme m ka m chee naanị maka iri nri eji megharịa ọnụ maka nri abalị. Abu m dimkpa. Enwere m ike iri ihe m chọrọ, oge ọ bụla m chọrọ. Nke ahụ apụtaghị na m ga-eme ya. 🙂